Otu esi etinye / kwalite na Nginx Mainline kacha ọhụrụ ma ọ bụ Stable na openSUSE Leap 15 - LinuxCapable
Fraịde, Ọktọba 22, 2021 by Jọshụa James
Wepu nwụnye Nginx gara aga
Bubata ebe nchekwa Ngnix
Nhọrọ 1. Bubata Nginx Mainline Repository
Nhọrọ 2. Bubata Nginx Stable Repository
Wụnye Nginx Mainline ma ọ bụ Stable
Otu esi emelite Nginx
Maka ndị na-eji openSUSE 15 leap, ị nwere ike chọpụtala na wụnye Nginx ozugbo site na ebe nchekwa ya anaghị wụnye ụdị kwụsiri ike ma ọ bụ nke kachasị ọhụrụ. Nke a bụ ihe a na-emekarị n'ọtụtụ nkesa na-elekwasị anya na nkwụsi ike nke ngwugwu ma na-enye naanị ahụhụ ma ọ bụ mmelite nchekwa ngwa ngwa ruo mgbe nkesa bụ isi na-esote.
Maka ọtụtụ, iji Nginx ndabara nke na-abịa jikọtara ya na ebe nchekwa ga-amasị ya, mana ọtụtụ mgbe ọtụtụ na-achọ ma na-achọ ụdị kwụsiri ike ma ọ bụ nke kachasị ọhụrụ maka njirimara emelitere. Nkuzi na-esote ga-ekpuchi na-etinye ụdị Nginx ikpeazụ ma ọ bụ isi okwu na openSUSE 15 Leap.
Mbụ, ịkwesịrị wepụ ọ bụla Nginx gara aga tupu ịwụnye ụdị Nginx ọhụrụ iji zere esemokwu.
Kwụsị Nginx iji sistemụ nye iwu dika ndi a:
Na-esote, wepụ Nginx site na iji iwu a:
Ugbu a ị wepụrụ ụdị Nginx ochie nke ọma, ọ bụrụ na etinyere ya, iji wụnye ebe nchekwa ọhụrụ ozugbo site na Nginx, ị ga-ebu ụzọ tinye iwu ndị a dabere.
Ka ịtọlite ​​​​na ibubata ebe nchekwa Nginx Mainline, mee iwu a na ọdụ gị:
Otu ihe dị ka Nginx Mainline dị n'elu, maka Nginx Stable, jiri iwu na-esonụ na njedebe gị:
na iji iwu iwu, bubata igodo GPG ka onye njikwa ngwugwu zypper nwee ike nyochaa izi ezi nke ngwugwu Nginx mainline:
Na-esote, a na-atụ aro ka ịnwale na nyochaa faịlụ nbudata nwere igodo kwesịrị ekwesị. Iji mee nke a, jiri iwu a na njedebe gị:
Mbupute ihe atụ kwesịrị ịpụta:
Ozugbo emechara, mezue mbubata igodo GPG site na ime iwu a:
Ozugbo ebubatara, manye ka emelite cache metadata.
Gaba n'ihu itinye Nginx na openSUSE site na ebe nchekwa ị webatara. Site na ndabara, ị kwesịrị ibubata otu n'ime ihe abụọ a na-enye.
ụdị Y ma pịa Tinye igodo ịga n'ihu na mezue nrụnye.
Rịba ama na enwere ike ịkpali gị idowe ma ọ bụ dochie gị dị / wdg / nginx /nginx.conf nhazi faịlụ n'oge echichi. A na-atụ aro ka idobe faịlụ nhazi gị ugbu a site na ịpị (s). A ga-eme otu n'agbanyeghị ụdị onye na-elekọta ya, ma ị nwekwara ike ịlele nke a n'ọdịnihu.
Nyochaa ma ọ bụrụ na arụnyere Nginx nke ọma yana na ụdị kachasị ọhụrụ site na iji iwu a:
Ihe atụ (Nginx Mainline Example)
Dịka n'elu, ụdị arụnyere n'oge edere nke ọma bụ ụdị Nginx Mainline kacha ọhụrụ.
Site na ndabara, ekwesịrị ịgbanye Nginx ma ọ bụrụ na agbaghị ya ọrụ. jiri:
Chọpụta ọkwa Nginx:
Ma nke ahụ bụ ya, ị wụnyela ụdị Nginx kachasị ọhụrụ.
Maka mmelite n'ọdịnihu, naanị ihe ị ga-eme bụ ịgba ọsọ njikwa ngwugwu zypper ka ị ga-elele sistemụ gị maka mmelite dịka ọ na-adị.
Nkuzi ahụ egosila gị otu esi etinye ebe nchekwa Nginx ka ị nwee ike ịdọrọ ma ọ bụ Nginx kwụ ọtọ ma ọ bụ ụdị kachasị ọhụrụ na sistemụ mepere emepeSUSE Leap 15 gị.
N'ozuzu, iji ụdị Nginx ma ọ bụ Mainline kwụsiri ike kachasị ọhụrụ adịghị mma ma e jiri ya tụnyere ngwanrọ ndị ọzọ ebe ahụhụ na enweghị ntụkwasị obi nwere ike ịdị. Nginx na-arụ ọrụ dị egwu na idobe ngwa weebụ ya nke ọma.
Categories openSUSE Tags NGINX, megheSUSE Leap 15 Mail igodo
Otu esi etinye onye ahịa mbugharị na Fedora 35